Iyo Nano chinyorwa mupepeti yakasvika vhezheni 3.0 uye iri 70% nekukurumidza | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Nano chinyorwa mupepeti yakasvika vhezheni 3.0 uye iri 70% nekukurumidza
Darkcrizt | | Noticias, Linux software
Nyika yeUNIX inowanzo kuve yakakamurwa kuita maviri makuru mapoka: vi (m) uye Emacs. Vapepeti vaviri ava vari, muchokwadi, kazhinji kacho chikonzero chekuvhunduka pakati pevateveri nekuda kwekusiyana kwefilosofi kunoitisa kuzadzikiswa kwavo.
Chinhu chechitatu, nano, chinowedzerwa mukukakavadzana uku kunyangwe inomiririra yakapusa uye inosvikika nzira. Nano iri, muchokwadi, iyo yekuraira mutsara edhita neiyo yepedyo nzira kune graphical editors senge Windows Notepad kana Gedit naKate mune Linux nyika.
Ichi chikonzero nei kazhinji ichi chiri chakakurudzirwa sarudzo yezvitsva kana yeavo vasina kujaira kushandisa rairo yekuraira.
nano ndeimwe yeanonyanyo kuzivikanwa terminal-based mameseji edhita. Ivo vanoramba vachikanganwa maitiro ekusiya Vim vanotsvaga hupoteri neGNU nano.
Munguva pfupi yapfuura iyi zvinyorwa zvemavara yakagadziridzwa uye yasvika vhezheni yayo 3.0 . Iyi terminal mameseji edhisheni eLinux inozivikanwa kwazvo nevatangi vanopinda munyika yeLinux.
Pasi pezita re «Mvura Inoyerera Pasi Pevhu», iyi vhezheni inovimbisa kukwidziridza iyo faira kuverenga kumhanya ne70 muzana. Kumwe kukura kukuru ndiko kumhanyisa kwakapetwa kweASCII zvinyorwa zvekubata.
Uyu mupepeti ndewemwari wekutanga uyo anofanirwa kubata nekuraira mutsara dhizaini panguva yakarongedzwa nano vanofarira vanongo fanidzira iyo kuzere kugona.
1 Chii chitsva muNano 3.0
2 Nzira yekuwana sei iyo nyowani vhezheni yeNano 3.0 pane yako Linux kugovera?
Chii chitsva muNano 3.0
Nano 3.0 iri yazvino vhezheni yakaburitswa uye inounza hukuru hwekuita mashandiro uye nezvimwe. Nano 3.0 inowedzera kuverenga kuverenga faira ne70%, kana zvakapetwa kumhanyisa kana uchibata ASCII encoded zvinyorwa
Idzi gadziridzo dzakanyanya kukosha kumafaira akakura, senge mafaera erogi (asi kwete chete).
Uyewo shanduko dzakaitwa kudikidiki dzekhibhodi, semuenzaniso unogona ikozvino kudzvanya CTRL + DEL kudzima rinotevera izwi, kana Ctrl + Shift + Del kudzima iro rakapfuura izwi.
Dzimwe shanduko ataurwa mukuzivisa kwekutanga kwatinogona kuratidza ndeiyi:
Mutsva nzira pfupi Ctrl + Delete kudzima rinotevera izwi
Ctrl + Shift + Bvisa nzira pfupi yekudzima iro rapfuura izwi
Mazhinji makiyi musanganiswa ekuchinja uye kuchinja
Kuzivikanwa kwedzimwe nzira dzekutiza
Inotaridza iyo chaiyo nhamba yemutsetse mubato remamiriro paunenge uchivhura faira
Kwete-Shanduko yekushandura sarudzo yakaendeswa kune Insert menyu
Negadziriro yeparutivi uye Nyowani Buffer mabhatani akatamirwa Kunyorera uye Isa mamenyu
Nano ikozvino inofuratira Esc keypresses pamberi pemutemo keyboard keyboard
Yekusunga kopi zvinyorwa zvakatumidzwazve kuteedzera uye zvisina kudurwa zvazotumidzwazve zita zvekunamatira
Iwe unogona kuwana rumwe ruzivo nezve GNU nano 3.0 pane ino yepamutemo peji.
Verenga mafaera 70% nekukurumidza
Kukurumidza kubata ASCII zvinyorwa zvakapetwa kaviri
Nzira yekuwana sei iyo nyowani vhezheni yeNano 3.0 pane yako Linux kugovera?
Nano ndiyo yakasarudzika mameseji edhita pane akawanda ekuparadzirwa kweLinux can inouya isati yaiswa. Unogona kuiwana mune huru yekuchengetera yezvinenge zvese kugoverwa kweLinux.
Asi Nekuda kweako kwazvino nano 3.0 kugadzirisa, iwe unofanirwa kumirira kugovera kwako kuti upe iyi yekuvandudza.
Ichave iri imwe nguva usati waona izvi mune yako system inogadziridza. Vashandisi veArch vanofanirwa kuiwana pamberi pevamwe vese, semazuva ese.
Iyo vhezheni nyowani haizove ichiwanikwa mune izvozvi zvaburitswa zvakagoverwa, senge Ubuntu 18.04, uye inogona kunge isingawanikwe mukuburitswa mune ramangwana (senge Ubuntu 18.10).
Panzvimbo iyoyo, inofanirwa kuwanikwa munguva pfupi iri mugove ine rolling release modhi.
Kunyange zvinokwanisika kuisa iyo application kubva kune yayo sosi kodhiKuti uite izvi, ingo enda kune inotevera chinongedzo kwaunogona kurodhaunira.
GNU nano 3.0 sosi kodhi
Kana iwe uchida kuziva zvishoma zvishoma nezve iyi nyowani kuburitswa kweiyo nano 3.0 mupepeti, unogona kutarisa shanduko Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo Nano chinyorwa mupepeti yakasvika vhezheni 3.0 uye iri 70% nekukurumidza
Iyo itsva vhezheni yeLinux Kubva kuKutanga 8.3 yave kuwanikwa